Ny sanganasan'i David Hockney dia mahatratra 80 tapitrisa dolara amin'ny lavanty | Famoronana an-tserasera
Izany indrindra ny sangan'asan'ny mpanakanto (pisinina misy tarehimarika roa), ny sanganasan'i David Hockney dia sarobidy, na mihoatra na latsaka, ho an'ny 80 tapitrisa euro tamin'ny varotra natao tao amin'ny Christie's tany New York. Ny trano lavanty malaza no toerana mety indrindra amin'ny fotoana, na dia amin'ity indray mitoraka ity aza tsy ho potika toa ny asan'i Banksy.
Portrait of a Artist dia sanganasan'i Hockney izay maneho tsara ny asa sy ny fomban'ity mpanakanto ity izay mbola velona ary iza no iray amin'ireo mpanakanto ankehitriny misy ifandraisany lehibe.
Ity asa Hockney ity dia manana nihoatra ny zava-bitan'i Jeff Koons 'Ballon Dog tamin'ny 2013, mpanakanto amerikana iray hafa izay mamaky ny rakitsoratra rehetra ihany koa. Portrait of Artista iray dia afaka nihoatra an'io isa 58,4 tapitrisa io rehefa nahatratra 60 tapitrisa tao anatin'ny segondra vitsy.
Izany rehetra izany dia satria miatrika ny sangan'asan'i David Hockney isika, satria ao no ahitanao azy fahitana manokana an'ny mpanakanto samy avy amin'ny fomba fijery eropeana sy amerikana tamin'ny taona 60; tamin'ny fotoana nihatagan'i Eropa tamin'ny Ady lehibe II.
Izy io dia asa iray izay manana ny zavatra rehetra tadiavin'i David Hockney, na dia hita aza ny zavatra hita, dia vitsy ihany no misy an'ity planeta ity. Mpanao hosodoko anglisy nanomboka ho malaza amin'ny taona 60 ary iza izao no lasa iray amin'ireo mpanakanto manan-danja indrindra ankehitriny. Mbola velona izy, ary sarotra ny milaza izany.
Tsy hoe mijanona fotsiny izy, fa afaka miresaka momba ny mpiara-belona hafa koa isika ny asany dia mahazo tehaka erak'izao tontolo izao. Ny sasany dia i Jean-Michel Basquiat, Peter Doig ary Rudolf Stingel. Miresaka momba ny mpanakanto manana sangan'asa mahatratra dolara an-tapitrisany dolara isika.
Un zava-kanto ankehitriny miely ary mbola tsy fantany izay alehany. An-tapitrisany no aloa amin'ireto sanganasa ireto, fa amin'ny zavatra nomerika rehetra, ny sary hoso-doko dia ahemotra any ambadika any.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » 80 tapitrisa euro ny sanda azo tamin'ny asa nataon'i David Hockney tamin'ny lavanty
Sambany nipoitra ny sary nalain'i Vivian Maier